FANONDRANANA OLONA ANY KOWEIT : Tovovavy maromaro nalefa niondrana omaly | NewsMada
Na dia efa voararan’ny lalàna aza dia mbola misy manao ihany izany amin’izao fotoana izao. Nisy ny tratra saingy tsy manakana ny tànana efa zatra mitsotran’ireo mpandika lalàna izany. Tato anatin’ny herinandro izay, indroa no nisy vehivavy maromaro nandeha niondrana tany amin’ity firenena ity, nefa jerem-potsiny…
Tsy ankijanona mihitsy amin’izao fotoana izao ny fanondranana olona mandeha mihazo an’i Koweit na dia efa voararan’ny lalàna aza izany. Tato anatin’ny herinandro, indroa izay, vehivavy maromaro no nanainga tetsy amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tetsy Ivato nihazo an’i Koweït. Ny alahady lasa teo no voalohany, tovovavy maromaro no nihazo ity firenena ity. Fiaramanidina nihazo ny nosy Seychelles no nitondra azy ireo tamin’izany ary tamin’ny 11 ora no fiaingana. Omaly ihany koa, mbola tovovavy maromaro no tazana teny amin’ity seranam-piaramanidina tetsy Ivato ity, ho any amin’io firenena io ihany. Ny tena mahagaga, izany rehetra izany, mizotra eo ambany mason’ny polisy miaro ny sisin-tany avokoa saingy tsy misy manakana ny rehetra fa mitazam-potsiny.
Tsy miova ny fomba fanao
Raha tsiahivina, efa namoaka ity raharaha ity ny teto anivon’ny Free News laharana faha-94 tamin’ny 28 desambra 2016 Tamin’ireto fandehanana indroa tato anatin’ny herinandro ireto, tsy niova ny fomba fanaon’ireo tovovavy ireo. Vao tonga eny amin’ny seranam-piaramanidina, manantona ireo polisy ao an-toerana ka izy ireo no manampy amin’ny fikarakarana ireo taratasy rehetra ahafahana manainga amin’ny fiaramanidina. Ny tsikaritra, mitondra valopy lehibe avokoa ireo tovovavy ireo ka ao anatin’izany avokoa ny antotan-taratasy ilaina rehetra. Raha vao mahita tovovavy mitondra ireo valopy ny polisy eny an-toerana dia avy hatrany dia manantona ary mandray an-tànana azy ireo. Ny mampitovy ireto vehivavy rehetra reto ihany koa, tsy mitondra entana be izy ireo fa entana kely afaka entin-tànana fotsiny. Ny fomba fitafin’izy ireo ihany koa dia mora fantatra, misy amin’izy ireo no mbola tsy mahay manao kiraro avo voditongotra akory fa tsy maintsy manao.
Vehivavy telo, lohandohan’ny mpisorona
Misy ireo mpandefa fa misy ihany koa ireo efa tratra, ny alatsinainy lasa teo, olona enina, mpandefa sy saika alefa, hiondra any Koweï no saron’ny polisy. Tetsy amin’ny toerana fanamboarana pasipaoro tetsy Anosy no nahatratrarana ny efatra tamin’izy ireo tamin’izany. “Efa teny ampelatanan’izy ireo avokoa ireo taratasy rehetra hikarakarana ny pasipaoro andeha ho any Koweït tamin’izany”, hoy ny loharanom-baovao voaray teo anivon’ny polisim-pirenena. Rehefa natao ny famotorana, nanondro olona roa hafa izy ireo ka ny andron’io ihany dia natao ny fikarohana sy ny fisamborana ary ny fisavana trano. “Pasipaoron’olona efa lany daty miisa 120 no tratra tao amin’izy ireo, niaraka tamin’ny tapakila sy Visa marobe. Nisy fifanarahana hiasa (ndlr: contrat de travail) vita amin’ny teny anglisy maromaro ihany koa sarona tao amin’izy ireo”, hoy ihany ny vaovao voaray. Araka ny fantatra dia natolotra ny fampanoavana omaly maraina izy ireo ka naiditra amponja vonjimaika avokoa. Manoloana izany, na dia misy aza ny ezaka ataon’ny tompon’andraikitra sasany fa mbola manao ny hafa dia tsy misy varany ny zavatra atao rehetra.
Fanondranana olona an’isa
1: taorian’ny namoahana ilay vaovao teto amin’ny Free News tamin’ny 28 desambra 2016 dia fantatra fa polisy iray no nafindra toerana niasa tany amin’ny toeran-kafa. Araka ny fantatra anefa dia tsy izy irery ihany fa maromaro no miray tsikombakomba amin’ity resaka ity. 11: amin’ny 11ora, saika amin’izay matetika no ora fiaingan’ny fiaramanidina mitondra ireo vehivavy andeha hiasa any Koweït. Ora vitsy mialohan’izay no fahatongavan’ireo olona andeha ireo. Izany hoe: mbola afaka atao tsara ny manakana ny fandehanan’izy ireo raha misy mandray andraikitra.
36: ampahan-karama mandritra ny 36 volana na 3 taona no ifanarahan’ireo mpiasa lasa any ivelany ireo fa alefany amin’ny olona mandefa azy. Atao an-taratasy ny fifanarahana, araka ny fantatra, ary fantatry ny olona mpampiasa azy izany.
7: fito taona an-tranomaizina no sazy tokony ho azon’ny olona manondrana olona tahaka izao araka ny voasoratra ao anatin’ny fehezan-dalàna famaizana. Tafiditra amin’izany ihany koa izay mpiray tsikombakomba aminy.